मध्यरातमा काठमाडौंको सडकमा सैन्यअभ्यास, बख्तरबन्द परेड किन निकालियो ? – News Of Global
मध्यरातमा काठमाडौंको सडकमा सैन्यअभ्यास, बख्तरबन्द परेड किन निकालियो ?
News Of Global मंगलबार, माघ २०, २०७७
काठमाडौं । सोमबार माघ १९ गतेको मध्‍यरातमा नेपाली सेनाले काठमाडौँको सडकमा बख्तरबन्द परेड निकालेको छ। १० युद्ध कवज गण स्वयम्भूबाट हातहतियारले सुसज्जित बख्तरबन्द गाडीसहित सडकमा नेपाली सेनाले परेड निकालेको हो।
यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासन हातमा लिँदा बख्तरबन्द गाडी यसरी नै सडकमा निकालिएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको माघ १९ कै छेको पारेर सडकमा सैन्यअभ्यास गराएका छन् । एकातिर विकसित राजनीतिक घटनाक्रम भइरँदा अर्कोतिर सेनाले भने परेड खेलिरहेको दृश्यलाई नेपाली सेनाले भने यसलाई ‘नियमित अभ्यास’ भनेको छ।
वृहत नागिक आन्दोलनका अभियन्ताहरुले सत्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रजगज भएको बेला ‘सेनाले बख्तरबन्द गाडीमा चढेर चक्रपथ चक्कर मार्नुको साङ्केतिक अर्थ के हो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तर, सैनिक प्रवक्ता तथा सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले नियमित अभ्यास योजना अनुसार सोमबार राति सेनाको गाडीले चक्रपथको चक्कर लगाएको बताएका छन्। सेनाका अनुसार राति बख्तरबन्द गाडीहरुले काठमाडौं चक्रपथको एक चक्कर लगाएको हो।